5.5 HP Johnson 1960 CD-17 CD site Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Sweden | Ụgbọala ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri
5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 site Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Sweden
osụk site ttravis on Sun, 10 / 28 / 2018 - 21: 14
Bo bụ ​​enyi nke saịtị a ebe ọ bụ na ọ bụ mmụọ nsọ maka m ka m nọgide na saịtị a na-agafe 13 afọ gara aga.
E zigara ya Mbata-Ụgbọ mmiri-Mgbochi-Ndozi Facebook Page November 1, 2009.
Ahịa 1960 5.5 HP Johnson CD-17 Parts
Ọ ga-amasị m ịnye gị ekele na ọtụtụ ekele maka mma gị
saịtị, na isiokwu Tune-Up.
Enweela m ọtụtụ n'ime ha, ha nọkwa n'ebe ahụ iji dozie ya
ajụjụ gbasara akpa mgbochi mbụ m mere.
Mech. Engineer site na ọrụ, m na-arụ ọrụ afọ 38 na mmanụ ụgbọala
akụrụngwa (Bosch) na Sweden, ya bụ, ahịa na ngwa ngwa maka gas
na engines diesel.
Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe bara uru na akụkọ ihe mere eme, ruo ugbu a, enwere m ọ fọrọ nke nta
na-arụ ọrụ na diesel diesel na gas engines.
Nkwụsị ikpeazụ anyị kpọsara maka 4-6 hp outboard maka ụgbọ mmiri 14'rowing anyị.
N'ịchọta otu azịza, anyị zụrụ Johnson Seahorse 5.5hp n'àgwàetiti anyị
Oké Osimiri Baltic n'èzí Stockholm, Sweden. Enwere ike ịgbanye engine, ya mere ajụrụ m ya
nwoke ahụ ma ọ bụrụ na ọ gbara ọsọ. "Ee, ihe dị ka afọ abụọ gara aga", ọ zara, yabụ anyị zụtara ya
maka 55 $.
The obere Johnson bụ CD17 (1960) nke nwere nọmba nsonye B 9716, nke bụ
mere na ụlọ ọrụ Johnson na Belgium maka ahịa ndị Europe.
Ogologo oge gara aga wee bụrụ ezigbo ihe ịma aka, mgbe ụfọdụ karịa ka ọ dị.
N'ụlọ, anyị hụrụ 80% mmiri n'ime tank, a na-ejikwa "fatịlarị" ya
otutu silicone, ihe mgbaàmà nke ekpo oke ọkụ (efu efu) n'ihi nracha
Thermostat. N'ihi ya, injin ahụ dị nso na "ili" ahụ. Ọkụ ahụ,
Otú ọ dị, ọ dị ọhụrụ ma nwee ezigbo ihu, ya mere ekpebiri m ịnwale "Mission
Enweghị ike ime. "
Ihe mbụ isi, mgbe ọ na-agbaji ụdọ, amabere ya na obere
aluminum tube, na mgbatị mmiri mmiri dị nso dị ka mmiri na-ekpuchi na-agbanye ya na "LocTite" na-adịgide adịgide. Ngwunye nke iko fibre jupụtara plastic
(Ntughari akwa) kwụsịrị ọrụ ahụ.
N'iwe ihe dị iche iche, isii (nke iri) bọtịnụ cylinder na otu (nke asaa)
Ebube na nkewa nke isi ike na ala dị ala mebiri. Ọbụna na
eji nlezianya na-atụgharị ihe ndị a enweghị ike ịchekwa n'elu
mma. E doziri nsogbu ahụ site na ịkụgharị 8,5mm bores, na iji tinye ha
na M10 eri eri. Mwepu nke M10 threaded eriri na ¼ "UNC eri
tinye ya, tinye ya na "LocTite" na-adịgide adịgide.
A gbajiri abụọ ahụ, ma nwee obere mkpirikpi, kpochapu mmanụ ọkụ, nke na-eme ka obi sie ike,
dị ka e kwuru, a rapaara, ọ na-eme ka ike ghara ịgwụ. Dị ka ụlọ na-adighi ike
eyi nke a na-eyi na ebe a na-ekpuchi, ebe a na-edozi ebe a, jupụta, ma na-ewuli elu
ya na iko fiber juputara plastic padding
Ọbụna njọ, agbagwo agba agba ọsọ ọsọ na njikọ kwekọrọ na ya
e bibiri nnukwu efere. Emere m ihe ngbado apị ọhụrụ n'emere m, na
ihe a na-etinye maka ite maka efere.
Ọkpụkpụ ọhụrụ (isi, nkwụsị, thermostat), thermostat, impeller, epo,
condensers, isi ihe, carburetor kit (nke na-agbanye plastik) gbakwunyere ọgbara ọhụrụ,
afụnye ntanet na eriri, arụnyere. Site n'ụzọ, m họọrọ igwe anaghị ata
ihe nkedo ígwè maka isi nke cylinder. Ha agaghị esi ísì, ya mere ha dị mfe
wepụ. Enwere m olileanya, Agaghị m ebu mpụ ha.
M na-eji LocTite / Permatex Form-a-Gasket na eri niile na mmiri
Mgbe niile na-arụ ọrụ a n'èzí na-agba ọsọ, ezi, idles, na-amalite na mbụ na,
ọ bụ ezie na ọ bụghị site na mmalite, ọ bụ nke ọhụrụ ka esere ese ma dị ka ọ dị
na-abịa kpọmkwem site na ụlọ ngosi. Ọnụ ego niile bụ 400 $ na ọrụ m, mana
ọṅụ nke ime ka mweghachi a enye m ụgwọ zuru ezu na
Ọ bụ # 28 na-egosi otú nlele si ele anya tupu eserese ahụ.
Na-enyocha 8,5mm, #48, tupu ị na M10 na-arụ ọrụ dị ka a hụrụ na #49. Ihe ntinye nkedo ejiji ya na ¼ "UNC eri, nke e mere n'ime ihe a, di ka a na-ahuta na # 34.
Isi edozi na ọkpọkọ ọkpọ nso dị nso na otu n'ime bores bolt, #42. Cavitations ma wuo ya na ntaneti "Nkedo akwa", #43.
A na-ahụ mkpịsị H / S na #45 na #47.
Na foto foto #44 ọhụrụ a na-ahụ maka H / S, ogologo oge, tupu ịmewaa, ọkpọdụ ọkpọ na cone maka nkedo mkpuchi. Enwere ike ịhụ ihe ntinye ntinye aka na nnukwu efere. Ogologo oge ochie ochie na-adị mma n'ọnọdụ ya ma jiri ya na atọ nke shellac dọrọ ya na mbụ.
Dika ayi jiri mmanu alkylat kama nke oma, o di nma. Otú ọ dị mgbe oge ahụ gasịrị, agbanwere m ka ọ bụrụ na m na-agbanye ụgbọ mmiri 94, n'ihi ya, anyị nwere ike ịnweta mmanụ ụgbọ ala dị ọnụ ala.
Foto ndị a na-egosi na Johnson Seahorse 5.5 hp dịghachiri azụ na ala na mgbe anyị na-agbanye ụgbọ mmiri na-acha akwụkwọ ndụ 14, tinye "Siljan" sitere na "JOFA" site na mmalite'70 -ies. A zụrụ dị ka nkwụsịtụ na-enweghị ike maka 400 $. Dị ka ọrịa strok, "JOFA" na-anọchite anya "Johnsons Fabriker" (Ụlọ Ọrụ). Otú ọ dị, ọ dịghị ihe jikọrọ ya na OMC, mana enwere ike mara maka ịme mkpuchi ice hockey na ihe ndị ọzọ na plastik na egwuregwu.
Dịka ị pụrụ ịhụ na m na-eji obere ụgbọ njem ebugharị iji wepụta ihe. Agba bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke mbụ (Audi 90 white) site na mpempe ọkụ na primer kwekọrọ. Mgbidi ojii ahụ na-ekpuchi ihe ọkụkụ na-adabere na ala foto ma na-agbakwunye na foto ndị ọzọ. Nakwa na ntinye nke engine, atụfuru m ihe ndị ahụ ochie na-eme ka mpempe akwụkwọ na gburugburu #27.
Achọtara m ndị ọhụrụ ahụ dị mma. N'izu ya, ụfọdụ ndị enyi kwuru - "... nke a na-ese ọhụrụ" ...!
Nwa m nwoke Samuel (8) nke a hụrụ na #78 nwere nnukwu ntụrụndụ na-eme njem nlegharị anya dịka ebe a, ya na nwanne ya nwoke bụ Hampus (5).
M na-anọdụ ala n'elu obere mmiri anyị dị na #5 na-achọ ịga n'ọnụ mmiri, "Mysingen". Ọnụ mmiri ahụ, nke buru ibu, 20X45 kilomita, na-amalite n'àgwàetiti anyị Ornö ma ọ bụ akụkụ nke Oké Osimiri Baltic (0.7% nnu). Baltic dị nnọọ ukwuu, 1300x 400 km. Ọ bụ agwaetiti ahụ ka ọ bụ agwaetiti kachasị dị n'àgwàetiti Stockholm, nke gụnyere 25.000 nnukwu agwaetiti!
Enyerela m ọtụtụ foto, ị nwere ike iji ya dị ka ịchọrọ. Ọ na-atọ gị ezigbo ụtọ ịmalite ịkpọtụrụ gị.
Ọzọkwa, na-enweghị ihe ndị magburu onwe ya na foto ndị m nwere ike ịbụ na enweghị m ọchị a.
M na-atụ anya ịnụ gị, na-atụ anya na ịchọrọ foto ...
Nọgide na-arụ ezi ọrụ ahụ.
Mkpụrụ ụgbọala ka na-agba ọsọ ọtụtụ afọ mgbe ọrụ gasịchara.
Lelee vidiyo nke Bo na ụgbọ mmiri ya & Ụgbọ ala
osụk site Fischer on Tus, 04 / 16 / 2019 - 21: 54
Job dị egwu Sir
Na-eweghachi otu unit ebe a na Wisconsin USA. Nwee ozi gị na foto gị. Daalụ maka ịkekọrịta.
3 awa 57 nkeji gara aga
4 awa 2 nkeji gara aga